Maxuu salka ku hayaa Af-duubka haweynda shaqaalaha QM ka tirsaneed ee muqdisho lagu af-duubtay . – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxuu salka ku hayaa Af-duubka haweynda shaqaalaha QM ka tirsaneed ee muqdisho lagu af-duubtay .
Ahmed weheliye Gaashaan 6 May 2018
muqdisho (mareeg news ) Araima badan oo dhoowr aha ayaa loo aaneey karaa ineey salka ku heeyso arintan afduubka ah ee muqdisho ka dhacday tobadyadii lasoo dhaafay.
gabdhan shaqaalaha ah ee ka tirsan hey’ada (ICRC) Ee qaramada midoobay ee muqdisho ugu af-duuban koox aan la garan cida ay yihiin ayaa waxaa loo badinayaa inee yihiin koox Dooneysa madax furasho.
maxuu salka ku heeyn karaa Afduubka Gabadhan?
magaalada muqdisho oo looga baran in lagu afduubto shaqaaale Hey’adeed sidoo kala ay cabsi badan ku qabin shaqaalaha gargaarka, ka shaqeeya ayaa waxuu falkan u muuqanayaa mid lagu abuuraayo walaac iyo cabsi la doonaayo in hey’adaha gargaarka fidiya iyo shaqaalahooduba ayna kusoo dhiiran caasimada, waxaa macquul ah in arinka ay ka dambeyaan hey’ado kale ama in la doonaayo in hey’adan laga raro caasimad waloow ay taas suurobi kareeyn.
waxuu kaloo arinkan ku tiirsanaan karaa In ladoonaayo in hey’aduhu wal wal amni oo xoogan ka muujiyaan caasimada si ay u dagaan meel kale oo ka baxsan caasimada kana amaan fiican.
Qorshooyinka Afduubkan ka dambeeya oo fikir ahaan la koowi kareeyn darteed waxaa macquul ah in Afduubka haweeyneyda uu Noqon karo kaliya arin ay wataan koox qowleysata ah oo dooneysa ineey qidmad lacag ah ku badashaan xuriyada gabdhan.
waxaa shaki ku jirin in arinkan uu yahay mid saameeyn xoogan ku yeeshay hey’adaha qaramada midoobay iyo shaqaalahoodaba, waxaase is weeydiin mudan hey’adaha iyo dowlada federalka maxee ka yeelayaan arinkan?
Sidee xaalka shaqaalaha QM noqonayaa hadii lagu guuldareesto dadaalada la wado ee ladoonayo in lagu soo celiyo xuriyada gabadha shaqaalaha ah ee la af-duubtay?
Qarax xoogan oo lagu beegsaday Ciidamada Kenya
Wafdi Kasocday wasaarada maaliyada Oo Lakulmay Madaxweyne Shariif Xasan